Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulamo ka wada Kismaayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulamo ka wada Kismaayo
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulamo ka wada Kismaayo
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa maanta kulamo halkaas kula leh madaxda ugu sareysa maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaas Axmed madoobe.
Ra’iisul wasaare kheyre oo xalay kaliya ku hoyday Kismaayo ayaa kulamo hordhac ah kula yeeshay madaxtooyada Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe,waxaana wararku ay sheegayaan in kulanka diiradda lagu saaray arimo ay kamid yihiin dib u soo celinta xiriirkii xumaaday ee maamulka Jubaland iyo dowlada Federaalka.
Maanta ayaa lagu wadaa in madaxda ay yeeshaan kulamo rasmi ah oo lagu gorfeynayo soo celinta wadashaqeynta maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe iyo dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaa la filayaa in kulamadaasi ay kasoo baxaan warmurtiyeedyo ku qotoma waxyaabihii ay kuwada heshiiyeen labada dhinac.
Si kastaba Maamulka Jubaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada maamulkaas taasoo sida qorshuhu yahay la filayo in ay qabsoomto bisha August ee soo socota.